Deeq: Safar cajiib ah
Safar cajiib ah
"Waxaan bartilmaameedsaday maxaa yeelay waxaan ahaa qoraa gabay ah. Taasi waa sababta kaliya ee ay i beegsadeen. Marka, waxaan goostay inaan sida ugu dhakhsaha badan u cararo. Waxaan la tashaday asxaabteyda sidoo kale doonaya inay u cararaan aniga oo kale, iyo qoyskeyga ku nool dibedda. Markaasaan lacag u kaydiyey si aan u bilaabo safarkaygii."
Tahriibayaasha ayaa isaga iyo safar kale u kaxeeyey xerada qaxootiga Dhadhaab ee Kenya halkaas oo ay uga sii gudbeen Nairobi. Safarku wuxuu ahaa mid daallan, waxay ku qasbanaadeen inay dhex maraan baadiyaha meel fog oo ay ka dhuumanayaan booliska.
"Waxaan ku qasbanahay inaan si taxadar leh u socono, xitaa mararka qaar dhuumashada geedo hoostooda. Kabahaygu waxay noqdeen wax aan faa'iido lahayn. Shaatigayga waan u kala jeexjeexay oo waxaan u isticmaali jiray sidii kabo maxaa yeelay ma heli kari waayay kabo cusub oo kabo ah. Dhulku wuxuu ahaa dhagax aad iyo aad u kulul. Waxaan sii wadnay socodka saacado. ”
Markii uu yimid Nairobi, Deeq wuxuu go'aansaday inuu isku dayo inuu aado Koonfur Afrika. Wuxuu la xiriiray nin wax tahriibiya oo abaabuley markab u socda Mozambique halkaas oo Deeq uu uga gudbi lahaa Koonfur Afrika. Wuxuu markabka fuulay Mombasa. Waxay badda ku sugnaayeen usbuucyo ka dibna kabtanka ayaa ku qasbay rakaabkii inay ka soo baxaan jasiirad cidla ah halkaas oo ay halkaas ku dhaafaan.
"Tahriibayaashu waxay tuulinayeen rakaabkii badda, iyagoo ku garaacayay ulo una jiiday markabka. Markii ay tuureen rakaabkii ayaa sirkaalkii markab la raacay. Waxaan ku booday biyaha waxaan badbaadiyey dad aan dabaasha karin. ”
Deeq waligiis ma uusan suuragelin inuu tago Koonfur Afrika. Taa bedelkeed, wuxuu go’aansaday inuu isku dayo inuu aado Masar. Wuxuu dib ugu laabtay Kenya ka dibna wuxuu sii raacay Uganda, South Sudan, iyo Sudan. Suudaan wuxuu ogaaday in tahriibiyeyaashiisa ay ka iibiyeen tahriibiyeyaasha Liibiya oo qorsheynayay inay geeyaan Liibiya. Wuu ogaa waxa masiibada naxdinta leh ku sugaysa ee uu halkaas kaga baxsaday.
"Waan ogahay sida ay wax u xun yihiin halkaas sababtoo ah asxaabtaydu way i digayeen. Kadib waxay noogu wareejiyeen meel kale. Intii lagu guda jirey safarkaas aniga iyo gabadha waxaan go'aansannay inaan baxno. Waxay ahayd sidii ismiidaamin. Wax fikir ah kama lihin halka ay ku taallay Khartoum. Si kastaba ha noqotee, saaxiib kaas oo yaqaan jidka Khartuum ayaa na hagayay. ”
=Deeq wuxuu nasiib u yeeshay inuu qof qaraabo ah ku helo Khartoum oo ka caawiyay ila tareenka inuu tago Qaahira. Ugu dambeyntiina wuxuu yimid nabadgelyo Masar kadib safar aan caadi ahayn. Wuxuu kula taliyaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaysan waligood isku dayin inay sidaas oo kale sameeyaan, waa wax aad khatar u ah.